एसइईको तयारी पुरा, प्रश्नपत्रलाई ६ तहको सुरक्षा !
एसइईको तयारी पुरा, प्रश्नपत्रलाई ६ तहको सुरक्षा !
काठमाडौँ - अघिल्लो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) का प्रश्नपत्र पटक–पटक आउट भएपछि यस वर्ष थप सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । ६ चैतबाट सुरु हुने एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र ६ तहमा सुरक्षा व्यवस्था गरी जिल्लामा पठाएको छ । अहिले काठमाडौंबाहेक ७६ जिल्लामा एसइईका प्रश्नपत्र पुगेका छन् ।
यस वर्षको एसइई परीक्षामा सबैभन्दा बढी काठमाडौं र कम मनाङबाट सहभागी हुँदै छन् । काठमाडौंबाट ३६ हजारभन्दा बढी र मनाङबाट जम्मा ५० विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुँदै छन् । यस वर्षको एसइई आगामी ६ देखि १७ चैतसम्म सञ्चालन हुँदै छ । अघिल्लो वर्ष १० चैतबाट एसइई परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अघिल्लो वर्षदेखि प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र निर्माण सुरु गरिएको थियो । ०७५ मा नियमिततर्फ चार लाख पचास हजार एक सय ८६ र बाँकी आंशिक गरी कुल चार लाख ७५ हजार परीक्षार्थीले परीक्षा फारम भरेका थिए ।